Free Thinker: မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ (၅)
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ (၅)
၆။ စင်ကာပူ အဆောက်အဦစနစ် - ကိုထွန်းနောင်မြင့်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထွန်းနောင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေ BE ဘွဲ့ရလာပြီး စင်ကာပူ NTU ကနေ မာစတာဘွဲ့တစ်ခု ထပ်ယူပါတယ်။ လက်ရှိ Resident Engineer အနေနဲ့ စင်ကာပူမှာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်လျှက် ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၈ ကနေ ခုချိန်ထိ ဆောက်လုပ်ရေးလောကထဲမှာ ကျင်လည်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ စင်ကာပူရဲ့ အဆောက်အဦတွေစနစ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ အပိုင်း (၂) ပိုင်းရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ပိုင်းက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေအကြောင်း နဲ့ ဒုတိယပိုင်းကတော့ လည်ပတ်နေတဲ့ Control system အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အဆောက်အဦးတွေနဲ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းက BCA (Building and Construction Authority) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက MND (Ministry of National Development) ၀န်ကြီးဌာန အောက်က Stat board ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Building and Construction Authorigy Act ဆိုပြီး ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
BCA ရဲ့ အဓိကတာဝန်တွေကတော့ အဆောက်အဦတွေ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိဘို့ စံချိန်စံညွှန်းတွေရေးတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလည်း အမှန်တကယ် ဆောက်လုပ်စေပါတယ်။ သူတို့ဆီက ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ ဆောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ လက်ရှိ ရှိပြီးသား အဆောက်အဦ တွေကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ခေတ်မီကစားကွင်းတွေမှာ ထည့်သွင်းလာတဲ့ Amusement riding တွေ အတွက်လည်း တာဝန်ယူတယ်။
နောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု သက်သာအောင် အဆောက်အဦဒီဇိုင်းတွေ လေ့လာတယ်။ အဲသလို အဆောက်အဦတွေတည်ဆောက်ဘို့ အားပေးတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ခေတ်မီနည်းပညာတွေသုံးပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်လျှင်မြန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ဘို့ သုတေသနတွေလုပ်တယ်။ အစိုးရရဲ့ Smart Nation programme မှာလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
နောက် BCA Academy တည်ထောင်ထားပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အလုပ်သမားတွေရဲ့ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး လုပ်ပေးတယ်။ ပညာရှင်အသစ်၊ အင်ဂျင်နီယာအသစ်တွေ မွေးထုတ်ပေးပါတယ်။
BCA ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ Board member ၁၄ ဦးပါပါတယ်။ အဲဒီ ၁၄ ဦးထဲမှာ CEO ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ non-executive member တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သင်ကြားရေးပိုင်းက ပညာရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါပါတယ်။
အဲဒီမှာ အဖွဲ့လေးတွေရှိပါတယ်။ Building Engineering group က ဒါရိုက်တာက Building Control Act အရခန့်အပ်ထားတဲ့ Commissioner of Building ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူရဲ့ Building control system တွေအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပါ။ သူ့ကို ၀န်ကြီးဌာနက တိုက်ရိုက်ခန့်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ consultant က တွက်ထားတဲ့ structure design တွေကို စစ်ဆေး အတည်ပြုပေးတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက sturcture investigation တွေ လုပ်တယ်။
နောက် Building Plan and Management group. သူကလည်း အာခီကထုတ်ပေးထားတဲ့ building plan တွေကို စစ်ဆေး၊ အတည်ပြုပေးတယ်။ Bill board ကြော်ငြာတွေအတွက်လည်း တာဝန်ယူတယ်။ လက်ရှိရှိနေပြီးသား အဆောက်အဦးတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းလည်း လုပ်ပေးတယ်။ Amusement park တွေအတွက် စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုပေးတယ်။
နောက်တစ်ဖွဲ့က Special Function group ပါ။ သူတို့က enforcement ပိုင်း အဓိကလုပ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွေ စည်းတွေစနစ်တွေ ဥပဒေတွေနဲ့အညီလုပ်ဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။
နောက် Construction Productivity and Quality group. သူတို့က ခေတ်မီနည်းပညာတွေသုံးပြီး မြန်လည်းမြန်၊ ကောင်းလည်းကောင်းအောင် လုပ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ Environmental Suitability Group ။ သူတို့က အဆောက်အဦးတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေရေး စနစ်ထည့်ဘို့ တာဝန်ယူလုပ်ပါတယ်။
Build Environment Technology Centre ကတော့ geological နဲ့ underground project တွေအတွက် တာဝန်ယူပါတယ်။
စင်ကာပူကဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ အဆောက်အဦတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဘို့ ဥပဒေနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက Building Control Act၊ နောက်တစ်ခုက Building Maintenance and Strata Management Act ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဥပဒေကို အထောက်အကူပြုမဲ့ နည်းဥပဒေတွေလည်း ချမှတ်ပြဌာန်းထားပါတယ်။ နည်းဥပဒေတွေကများတော့ အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ ဒီဥပဒေ အားလုံးကို Singapore statutes online ကနေ download လုပ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး စင်ကာပူမှာ Building Control System ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပါမယ်။ ပထမဆုံး Building ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်။ ယာယီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲတမ်းနေမဲ့ အဆောက်အဦပဲဖြစ်ဖြစ် Building လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ Building မှာ အမိုးအကာပါမယ်။ ယာယီမြေထိန်းနံရံ၊ ဆိပ်ခံဘောတံတား၊ တံတားတွေ၊ မြေအောက်လိုဏ်တွေ၊ ရေမြောင်း စသဖြင့် အားလုံးပါပါတယ်။ အငြင်းပွားစရာမဖြစ်အောင် ဥပဒေထဲမှာ Building ဆိုတာဘာလဲလို့ အားလုံးရှင်းပြထားပါတယ်။
Building ဆိုတာမှာ site တစ်ခုကို စပြင်တာကနေ အပြီးထိ အားလုံးပါပါတယ်။ Owner ဒါမှမဟုတ် developer က ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၊ consultant အဖွဲ့တွေရှာပြီး ခန့်ထားရတယ်။ နောက်တည်ဆောက်မဲ့အဖွဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီပရောဂျက်အတွက် QP (Qualify Person) တွေခန့်ရတယ်။ QP for Archi work, QP for Structures, QP for M&E စသဖြင့်ပေါ့။
ပရောဂျက်တစ်ခုမစခင် ဘာစလုပ်ရလဲဆိုတော့ URA (Urban Redevelopment Authority) ကို ပါမစ်တင်ရပါတယ်။ သူကလည်း MND အောက်က Stat board တစ်ခုပါပဲ။ URA က တင်လာတဲ့ plan ကိုစစ်ဆေးပြီး written permission ထုတ်ပေးလိုက်ရင် Architecture က Building plan ကို BCA ကို တင်ပြရပါတယ်။ BCA က သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီသလား စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုပေးပါတယ်။ မကိုက်ညီတဲ့အချက်တွေပါလာရင် ပြန်ပြင်ပေးရတယ်ပေါ့။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် Building Plan approval ချပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်က structural design ကို သတ်မှတ် ထားတဲ့ code တွေ standard တွေအရ တွက်ချက်ပြီး တင်ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် protection layer တစ်ခုထားတဲ့အနေနဲ့ ပရောဂျက်တန်ဘိုး ၁၅ သန်းကျော်ရင် နောက်ထပ် ပီအီး တစ်ယောက်က သီးခြား စစ်ဆေးရပါတယ်။ မူရင်းပီအီးက တွက်ပေးတယ်။ နောက်ပီအီးက စစ်ဆေးတယ်ပေါ့။ အဲဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးမှ BCA ကို တင်ရတယ်။ BCA က ပြန်စစ်ပြီး လိုအပ်တာ၊ သဘောမကျတာတွေ့ရင် ပြန်ပြီး ညွှန်ကြားချက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီညွှန်ကြားချက် ပေါ်မူတည်ပြီး PE က သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြန်တွက်၊ ပြန်တင်ရတယ်။ Structural plan approve ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြီးသွားပြီ။
ဆောက်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းတွေကို အနီးကပ်ကြီးကြပ်မဲ့ site supervisor တွေကိုလည်း ခန့်ထားရပါတယ်။ နောက် RE, RTO တွေကိုလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ခန့်ထားရပါတယ်။ အဲဒီသူတွေက ဆောက်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွှန်း တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းကို ကွပ်ကဲရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင် BCA ထိ တိုက်ရိုက်တင်ပြလို့ရတယ်။
BCA, NEA စတဲ့သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်ရပြီဆိုရင် လုပ်ငန်းတွေစလို့ရပါပြီ။ ဆောက်လုပ် ဆဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာစတာတွေကို RE တို့ Consultant QP တို့က ဖြေရှင်းသွား ပါတယ်။ BCA ကလည်းရှောင်တခင် ၀င်စစ်တတ်ပါတယ်။ မှားနေတာတွေ့ရင် ထောက်ပြမယ်။ အဲဒါဆို တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ဖြေရှင်းရပါတယ်။
ဒါကတော့ BCA က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပရောဂျက်တန်ဘိုးပေါ်မူတည်ခန့်ထားရတဲ့ QP, RE, RTO စာရင်းပါ။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြီးသွားရင် RI (Registered Ispector) တွေခေါ်ပြီး architectural work, M&E work တွေ အားလုံးစစ်ဆေးပါတယ်။ မကိုက်ညီတဲ့အချက်တွေတွေ့ရင် မှတ်ချက်ပေးတယ်။ နောက်ပြီး second inspection, third inspection စသဖြင့် အားလုံး clear ဖြစ်သွားတဲ့ထိ လုပ်ပေးရပါတယ်။
အားလုံး clear ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် BCA ကို လူနေထိုင်ခွင့် TOP (Temporary Occupation Permit) လျှောက်ထားရပါတယ်။ အဲဒီအခါ BCA က သူ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ လာစစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ မကိုက်ညီတာတွေရှိရင် မှတ်ချက် ပေး။ second inspection, third inspection စသဖြင့် အားလုံး clear ဖြစ်သွားတဲ့ထိလုပ်ပေးရပါတယ်။ အားလုံး clear ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ လူနေထိုင်လို့ ရပါပြီ။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးသွားပေမဲ့ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စအနေနဲ့ As Build drawing တွေ တင်ပြရပါတယ်။ မုရင်းဒီဇိုင်း နဲ့ အသေးစားကွဲလွဲမှုတွေကို ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ BCA ကို ပြန်လည်တင်ပြရပါတယ်။ နောက် အဆောက်အဦနဲ့ထိစပ်နေ တဲ့ NEA, NParks စတာတွေဆီကနေလည်း Clearance ယူရပါတယ်။
အားလုံး clear ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ CSC (Certificate of Statutory Completion) လျှောက်ရပါတယ်။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးပိုင်းပါ။ ဒါပြီးရင် အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။
နောက်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာ အဆောက်အဦရဲ့ ခိုင်ခံ့စိတ်ချရမှုကို BCA က Professional Engineering တွေကို စစ်ခိုင်းပါတယ်။
ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ အဆင့်တွေအရမ်းများလို့ အချိန်အတော်ကြာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လုပ်ထားတဲ့စနစ်က Building Plan, Structure plan စတဲ့ တင်ပြရတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို အွန်လိုင်းကနေ လုပ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေတင်ပြီး အွန်လိုင်းကနေပဲ ပြန်ကျလာတယ်။ အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာ ဘာတွေလိုအပ်တယ်။ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်။ Procedure က ဘာဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် လုပ်ရ ကိုင်ရ အဆင်ပြေတယ်။ အငြင်းပွားစရာကိစ္စတွေ မရှိတော့ဘူး။ Undertable ကိစ္စတွေ မရှိတော့ဘူး။
နောက်ပြီး သူတို့က Building Control Act, BCA စသဖြင့်ရှိနေပြီးသားပဲဆိုပြီး ဒီအတိုင်းမထားဘူး။ အမြဲပြန်လည်သုံးသပ် နေတယ်။ သူတို့စနစ်ကို အမြဲပြန်လည် ဆန်းစစ်နေတယ်။ ဒီစနစ်နဲ့လည်ပတ်နေတုံးမှာ accident/incident တစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ ရင် သူတို့စံနစ်မှာ ဘာမှားနေသလဲဆိုတာ ပြန်ပြီး ဆန်းစစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို အရေးယူလိုက်ရုံနဲ့ ဒီပြဿနာဟာ ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာရဲ့ တကယ့်အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဘို့လိုတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ခု လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အဖြေရှာ တယ်။ ဒါဟာ အင်မတန် အတုယူစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီမှာကျွန်တော် case study တစ်ခုတင်ပြထားပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ကွန်ကရစ်လောင်းနေတုံး ငြမ်းပြိုကျပါတယ်။ လုပ်သား (၂) ယောက်သေပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးပြီး main cond, sub cond တွေကို ဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောင် ဒီလိုမဖြစ်အောင် MOM က scaffold အတွက် safety requirement တွေ ပိုပြီး တင်းကြပ်လိုက်ပါတယ်။
သူတို့က ဒီလို သူတို့စနစ်တွေကို အမြဲလေ့လာဆန်းစစ်၊ ပိုကောင်းအောင် အမြဲံလုပ်နေတော့ အကြီးစား မတော်တဆမှုတွေကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nicoll highway accident ဖြစ်ပြီး နောက် ကြီးကြီးမားမား accident သိပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခုဆောက်လုပ်ရေးတွေမှာ excavation အများကြီးပါလာတဲ့အတွက် မြေတူး တဲ့လိုအပ်ချကတွေကို ပိုတင်းကျပ်လာပါတယ်။
ဒါက သူတို့ဆီမှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အဲသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ တိုက်ရိုက် ကော်ပီကူးချဘို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်ကိုင်နေတာတွေ နမူနာယူပြီး ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင် သုံးစွဲဘို့ ပြောတာပါ။
ဒါ့ထက်ပိုသိချင်သေးတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆီ လှမ်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
Posted by အေးငြိမ်း at 11:31 PM